Kunyorera kuwedzera miganhu kumifananidzo 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Iwe ungade here kushongedza iwo mafoto awakatora neako smartphone nekuwedzera mamwe anonakidza mafuremu kwavari, asi iwe hauzive kuti ndeapi maapplication aunoshandisa? Usanetseke - iwe wawana chinhu chakakodzera, panguva yakakodzera! Mumitsara inotevera, kutaura zvazviri, ini ndinonyora mamwe app yekuisa miganhu pamifananidzo Izvi zvingave zvakakunakira iwe.
Unoti sei? Iwe hausi kujairana kwazvo neako smartphone (kana piritsi rako) uye uri kutya here kuti haugone kushandisa izvi zvinoshandiswa nenzira kwayo? Iwe zvachose haufanire kunetseka nezve izvi, nekuti ini ndichatsanangura zvakadzama kuti uchafanirwa sei "kufamba". Chimwe chinhu chausingafanire kunetseka nezvacho mutengo - mazhinji mhinduro dzandiri kuzopa iwe unogona kutorwa pasi uye kushandiswa pasina muripo.
Panguva ino, ini ndingati usarasike mune imwezve hurukuro uye enda wakananga pamoyo weiyi dzidziso. Kana iwe wagadzirira kutanga, gara kumashure, tora nguva yako kuyedza iwo maapps akanyorwa pazasi, uye kana iwe uchinge wawana iwo aunoda zvakanyanya, shandisa iwo kuwedzera miganho kumifananidzo yako. Ndinokushuvira kuverenga kwakanaka uye kunakidzwa kwakawanda!
Kunyorera kuisa machena machena pamifananidzo
Yakatorwa (Android / iOS / iPadOS)
Zvimwe zvinoshandiswa kuisa machena machena pamifananidzo
Kushanda kwekugadzira zvakapfava mumifananidzo
Gradient micheto (Android)
MigumisiroShop (iOS / iPadOS)
Kana uchitsvaga kunyorera kuisa machena machena pamifananidzo, mhinduro dzandiri kuda kukupa pasina mubvunzo dzichava dzekuda kwako, nekuti dzinokutendera kuti uzviite, nenzira yakapusa.
Imwe yeakanakisa app yekuisa miganhu pamifananidzo es Yakakundwa, mhinduro yemahara yakagadzirwa neGoogle iyo iri nyore kushandisa. Kubata kwakazara kwazvo uye, pamusoro pekubvumidza kuwedzerwa kwemafuremu kumifananidzo yako, zvakare inokutendera kuti uadzokorezve nekushandura iwo makuru parameter: ruvara, kupenya, kupesana, kuratidzwa, nezvimwe.
Mushure mekurodha pasi yakakwenenzverwa pane yako Android chishandiso (zvakare inowanikwa mune dzimwe nzvimbo zvitoro zvemidziyo isina Play Store) kana iOS / iPadOS, itange iyo nekukanda bhatani Vhura kana nekudzvanya pane yayo icon iri pane iyo skrini yepamusha. Wobva watanga kugadzirisa pikicha, tora pese pese pachiratidziro uye sarudza mufananidzo kuti ushandise. Paunenge uchikurudzirwa, ipa zvibvumirano zveapp kuti uwane iwo mafoto.
Paunenge iwe wasarudza iwo mufananidzo kuti ushandise muganho chena kuenda, tinya chinhu Zviridzwa iri pazasi, pinda inzwi Marcos kubva kumenyu inovhura uye sarudza imwe yeakawanda macheto inowanikwa: sezvaungaona, pane akati wandei zvinangwa.
Kuti uwedzere hukobvu hwefuremu, tsvedza chigunwe chako kurudyi; kuti udzikise ukobvu hwayo, tsvedza chigunwe chako kuruboshwe. Kana oparesheni yapera, pinda tarisa mucherechedzo pazasi kurudyi kusevha shanduko uye bata chinhu Tumira kunze, kutumira kunze uye / kana kugovana mhedzisiro yekupedzisira nevamwe vashandisi.
Pixlr ndeimwe yeakanakisa mapikicha ekugadzirisa mapikicha kunze uko. Pamusoro pekuve neseti yakakwana yezvishandiso, nekuda kwekuti uite pamatanho epamusoro ezvifananidzo, zvinopa mukana wekuisa miganhu uye mafuremu mune ako mapfuti mune 2-3 matepi. Ndisati ndaona maitiro ekuishandisa pamwe chete, ndinoda kukuudza kuti nekutenga iyo yakazara vhezheni, iyo inodhura 3,49 euros, zvinokwanisika kubvisa mabhenji ekushambadzira aripo mune yayo yemahara vhezheni uye kuwana ese ekugadzirisa maturusi.
Mushure mekupedza kurodha pasi kwePixlr pane yako Android chishandiso (inowanikwawo muzvimwe zvitoro zvemidziyo isina Play Store) kana iOS / iPadOS, vhura iyo application uye pane yako yepamba skrini, tinya chinhu Foto kusarudza chifananidzo kubva kuGallari (hongu, iwe uchafanirwa kuchipa mvumo yekuwana zvemukati zvemidziyo kuti udaro).
Mushure mekuita izvi, sarudza chiratidzo che bhokisi (pasi kurudyi) uye, mumenyu inovhura, sarudza imwe yemiganhu chena inowanikwa, senge chena, limpio ari inotapira. Pachirongwa chinotevera, shandisa iyo cursor iyo inowanikwa pasi pechidzitiro kuti iwedzere kana kudzikisira iyo fomu application. Wobva washandisa zviratidzo zve miseve flip furemu kana kuitenderedza uye nekukurumidza kana iwe wagutsikana nemhedzisiro yekupedzisira, chengetedza shanduko dzakaitwa kumufananidzo nekudzvanya bhatani tarisa mucherechedzo (pazasi kurudyi).
Iye zvino zvese zvaunofanirwa kuita kudzvanya izwi rako zvaitwa (kumusoro kurudyi) uye chengetedza iwo mufananidzo uye / kana kuugovana uchishandisa iyo yekuchengetedza uye yekugovana mabasa akaisirwa mukushandisa.
ari app yekuisa miganhu pamifananidzo izvo zvandakanyora mundima dzapfuura hazvina kunyanya kukugonesa? Pakadai, ndinokurudzira kuti iwe utarisewo mhinduro dzemahara dzandanyora mumitsara inotevera. Ndine chokwadi chekuti imwe yeaya mafomu inogona kuve yako.
Photo Collage (Android / iOS / iPadOS) - Kana iwe uchitsvaga Anwendung iri nyore kushandisa asi yakazara nezvinhu, iyi yemahara mhinduro inogona kunge iri yako. Pic Collage, kunyangwe iri application yakanangana nekugadzira mapikicha emifananidzo, inogona zvakare kubatsira pakuwedzera miganho kune ako mapfuti, nekuda kwemabasa akasiyana siyana anosanganisirwa, mamwe acho anobhadharwa uye akaverengerwa mune yekunyorera vhezheni, nemari ichitanga kubva ku39,99 euros / gore.
PicsArt (Android / iOS / iPadOS): Ichi chishandiso chine mashoma interface inoita kuti basa rekugadzirisa rive nyore kumushandisi. Pamusoro pekubvumidza iwe kuisa muganho mumifananidzo, zvinokutendera iwe kuti ugadzire macollege uye nekuchinja iwo maruva uye kumashure kwepfuti dzako nekungobata mashoma. Mamwe emabasa ayo anowanikwa nekunyorera kunyoreswa kutanga pa € ​​30,99 / gore.
Photo Collage (Android) - Ichi chimwe cheakanakisa maapplication ekuisa mapikicha emifananidzo pane chinhu cheApple. Photo Collage, sezvaungafungidzira kubva kuzita, "yakazvarwa" kunyanya seapp yekugadzira macollage, asi zvishandiso zvinosanganisirwa zvinokutendera iwe kushandisa akareruka uye "akakosha" mafuremu kune ako mapfuti, pamwe nemavara uye zvimwe zvekushongedza. .
Pic Stich (iOS / iPadOS) - Unoda kugadzira pikicha collage yekuisa mitsara ine mavara kune akawanda mafoto panguva imwe chete? Mune ino kesi, ini ndinokurudzira kuti uedze Pic Stich, yemahara mhinduro iyo inokutendera iwe kuti uite izvo chete mune 3-4 matepi zvakanyanya. Kana iwe uine iPhone kana iPad, Pic Stich inogona kupedzisira yagumira mune yako aunofarira maapplication folda pane chako kifaa. Kuti uwane iyo "yakazara package" yemiganhu uye mafuremu, zvinodikanwa kutenga iyo yakabhadharwa vhezheni, iyo inotanga pa 32,99 euros / gore.
Kana uchitsvaga kunyorera kugadzira zvakapfava mumifananidzo, ziva kuti kunyangwe mune ino kesi pane mhinduro dzinoverengeka iwe dzaunogona kutendeukira - heino iwo mune zvakadzama.
Makapfava akapfavaSeizvo zita rayo rinoratidzira, iko kunyorera kweye Android zvishandiso (zvakare inowanikwa mune dzimwe nzvimbo zvitoro zvemidziyo isina Play Store) iyo iyo iwe yaunogona kusvibisa mhedzisiro yemapikicha ako, uchivapa iwo akanaka kwazvo uye anoratidzika chitarisiko. Iyo 100% yemahara - ngatione kuti inoshanda sei pamwe chete.
Mushure mekuisa uye nekumhanyisa Soft Edges pane chako chishandiso, tinya iyo kadhi repositi rine chiratidzo (+) Nechekumusoro kurudyi, ipe mvumo yekuwana mafaera mundangariro uye sarudza chishandiso chaunotora mufananidzo (semuenzaniso. Galleria). Wobva wadzvanya pachiratidzo chekutanga chemufananidzo waunoda kunyangarika Makona.
Kana iyo pikicha yaiswa, gadzirisa iyo blur uye yakakomberedza makona uchishandisa i vanotuka iri pamabhawa ekugadzirisa ari kumusoro kwechiso. Kumanikidza pachinyorwa ruvara (kumusoro kuruboshwe), unogona kusarudza blur ruvara; paunenge uchitarisa bhokisi njenjemera Iwe unogona kuisa yakapfava yakajeka muganho kumufananidzo wakasarudzwa. Paunenge wagutsikana nemhedzisiro, tinya bhatani. Chengetedza (kumusoro kurudyi) uye mirira kuti pikicha ichengetwe kuchinhu Zviri nyore kupfuura izvozvo?
MigumisiroShop ndeimwe yemahara mhinduro yandinokukoka iwe kuti uyedze, sezvo ichitendera iwe kugadzirisa ako mapfuti, kugadzira macollage uye kunyange kutadza mabara. Kunyangwe uine akawanda mabasa, kuishandisa nechinangwa chiri mumubvunzo hakuna kuomarara zvachose, nekuda kweyakagadziriswa mushe. Inongowanikwa chete kune iOS / iPadOS.
Mushure mekuisa uye kutanga EffectShop, tinya iyo icon mwere iri kurudyi, tinya icon magic wand kuruboshwe uye, mushure mekupa iko kunyorera mvumo inodiwa kuti uwane iwo mafoto, tinya pane yaunoda kugadzirisa.
Panguva ino, sarudza fomu chinhu chaunoda kushandisa (ex. 1: 1, 2: 3, etc.), bata chinhu Enderera (kumusoro kurudyi) uye sarudza imwe yeiyo kukanganisa kuisa pamufananidzo pakati payo inobvumidza iwe kuti uwane mhedzisiro ine yakapfava mativi uye bata chinhu Shandisa (kumusoro kurudyi). Kuti ubvise watermark inoshandiswa nekukasira kumufananidzo, dhonza kunze kwemufananidzo uchichengeta chigunwe pairi.
Wobva wadzvanya bhatani Fund (pazasi kurudyi), tora chiratidzo donha uye fambisa iyo cursor iripo pane yekugadzirisa bhawa iri pazasi kurudyi kana kuruboshwe, kugadzirisa mwero wekukanganisa kwemipendero.
Kuchengeta iyo yekupedzisira faira, tinya icon museve wakananga kunongedza (pazasi kurudyi), sarudza chinhu Zviri nani ari Kurumidza (zvinoenderana nehunhu hwekunze hwaunofunga kushandisa) uye ndizvozvo.